Kubvunzana naDavid Zaplana naAna Ballabriga. Ndiri Rose Mutema. | Zvazvino Zvinyorwa
Kutaurirana naDavid Zaplana naAna Ballabriga: Kana budiriro ikauya pamaoko mana.
Ana Lena Rivera Munoz | | Hurukuro
Rudzi rwevatema-rworudo rwuri kurova zvakaoma nevaravi vanonakidza vachitiza mhirizhonga yakanyanyisa
Tine ropafadzo uye mufaro wekuva nhasi pabhurogi redu ne David zaplana (Cartagena, 1975) naAna Ballabriga, (Candasnos, 1977), vanyori vaviri vemhando dema, Amazon Indie Award vanokunda neruzivo rwake Kwete Wechokwadi weScotman, ndiani ave kupinda izvi nyowani nyowani yemhando inosanganisa yerudo inoverengeka neyematsotsi novel uye izvo zviri kutanga kurova zvakanyanya pakati pevaverengi, ne Ndiri Rose Mutema.
Mabhuku Nhau: Isu vanyori tine mukurumbira wekusurukirwa, kunyara, uye kunyangwe zvishoma "zvakashamisa". Unoenderera mberi sei nekunyora nemaoko mana? Hunhu hwemunyori huri kuchinja muzana ramakumi maviri nemana here?
David Zaplana naAna Ballabriga: Isu tatoziva mamwe mapara evanyori vanonyora nemaoko mana, kunyange zviri pachena kuti haisati yave yakajairika. Basa remunyori rakasurukirwa chaizvo uye kurigovana nemumwe munhu (kwatiri, nevaroorani) zvinoita kuti zvinyanye kutsungirira, nekuti une chirongwa chakajairika chaunogona kutaura nezvacho uye kutarisana pamwechete matambudziko anomuka. Zvakare, kana uchinyora sevaroorani, kushambadzira nzendo (mharidzo, mhemberero, nezvimwewo) zvinonakidza.
Chikamu chakashata, mune makotesheni, ndechekuti iwe unofanirwa kudzidza kutaurirana, kubvuma kushoropodzwa uye kurasa mazano anoita kunge akanaka kwazvo kwauri, asi kwete kune mumwe. Nekudaro, isu tinotenda kuti mhedzisiro inowanikwa kuburikidza nekushanda pamwechete inogara iri nani pane yega. Paunonyora nemaoko mana unofanirwa kusiya hunhu hwako, unomira kuve mhizha kuti uve mhizha.
AL: Iwe wakatanga kunyora anopfuura makore gumi apfuura, uchizviita iwe unozivikanwa kuburikidza nekuzvitsikisa-wega nekubudirira kukuru, kuhwina 10 Amazon Indie mumakwikwi neNo True Scotsman. Mubairo uyu wairevei pabasa rako rekunyora?
DZ NAAB: Isu tanga tichinyora kweanopfuura makore makumi maviri. Nhoroondo yedu yekutanga (Akayambuka nenguva) yakanga isina kuburitswa uye maviri anotevera (Mushure mezuva reCagagena y Gothic Morbid), tinozvitsikisa nevashambadzi vadiki. Chiitiko ichi chaive chakanaka kwazvo zvine chekuita nekurapwa kwega, asi kugovera kwakatadza: mabhuku haana kusvika kuzvitoro zvemabhuku. Iri ndiro dambudziko hombe kune vaparidzi vadiki. Saka takafunga kuti inotevera yaifanira kutsikisa mumuparidzi mukuru. Yapera Chirevo cheMapofu Librarian mumakore akaomesesa enjodzi uye isu takatanga kuatumira kune vaparidzi vakuru, asi mhinduro yaigara yakafanana: "Ndine urombo kukuzivisai kuti basa renyu harikwane mumutsara wedu wekushambadzira." Saka tinoiisa mudhirowa. Muna 2015 takapedza imwe novel, Kwete Wechokwadi weScotman. Takatanga rwendo rwekutumira kune vanozivisa vaparidzi uye vamiriri vevanyori vane mhedzisiro yakafanana. Kupupurira kushungurudzika kwedu, shamwari (Blanca, uyo watichagara tichimutenda) aigara achisimbirira kuti ramangwana ririmo mumapuratifomu edhijitari uye, kunyanya, muAmazon, nekuda kwekureruka kwazvo kuzvishambadza. Saka takafunga kuyedza. Isu takaisa edu ekutanga matatu enganonyorwa kuti tione mashandiro ayo, tichichengetedza mamwe maviri ari mudhirowa. Uye mushure memwedzi yakati wandei yekutsvaga mumaforamu, kusimudzira pasocial network nekushandisa maturusi anoiswa neAmazon kwauinazvo, zvakatishamisa, mabhuku akatanga kutengeswa. Pamusoro pazvose, Mushure mezuva reCagagena, iyo yaibata pamusoro pevatengesi zvakanyanya kwemwedzi yakati wandei. Ipapo ndipo pakauya meseji kwatiri tichizivisa kumakwikwi eAmazon Indie uye takasarudza kupa Hapana chechokwadi scottish nazvo (isu tichiri kusazvitenda) takakwanisa kuhwina pakati pevadzidzi vanopfuura 1400.
Kukunda mumakwikwi kwaive kukurudzira kukuru. Chekutanga kushamisika ndechekuti isu takakokwa kuenda kuFIL kuGuadalajara (Mexico) kuzopa inova yedu. Icho chaive chiitiko chinoshamisa, asi chakanyanya kukosha chinhu icho mubairo waunotiunzira isu kutsvaga muenzanisi akanaka uye kutsikisa neAmazon Publishing. Mubairo uyu watipa kuoneka, vanobatika uye wativhurira madhoo. Zvino, patinopedzisa novel, tinoziva kuti zviri nyore kuiburitsa.
AL: Mushure memanyowani maviri ematsotsi, akaomarara kunyangwe, mune yekupedzisira iwe unopinda mhando nyowani, hafu pakati penyaya yematsotsi uye yerudo rungano. Pave nemakore mashoma kubva Nordic-maitiro ematsotsi enhau anotarisana nemhondi dzepfungwa dzepfungwa dzinouraya nekuda kwekunakidzwa kwekuona kurwadziwa mumaziso emunhu akabatwa kwakatanga kuve nekukwezva pakati pevaverengi. Vaverengi vava kukumbira inotapira mhosva nyaya?
DZ NAAB: Ini ndinofunga kune vaverengi vese zvese. Anenge munhu wese anofarira nyaya dzakavanzika, asi havazi vese vanofarira nyaya dzakaomarara dzinoita kuti uve nenguva yakaoma kana kufungisisa nezvechokwadi chakaomarara chakatikomberedza. Rose Nhema inyaya yakasununguka kuverenga uye nekudaro isu tinotenda kuti inogona kusvika kune yakakura vateereri kupfuura edu ekare mabhuku.
Nekudaro, isu hatina kusarudza kuita kuti Rose Nhema titengese yakawanda. Tinoda kuyedza zvinhu zvakasiyana uye kuti enganonyorwa dzakasiyana zvakanyanya. Kana paine mumwe munhu anotitevera, hatidi kuvatorera nekugara tichivaudza nyaya imwe chete. Isu takanga tambonyora dzinoverengeka dzerudo zvinyorwa izvo zvatakazvitsikisa-pasi pezita rekunyepedzera. Rose Nhema yakabuda seyakasanganiswa yepasirese nyika, yepingi uye nhema, yerudo rudo uye zvakavanzika.
AL: Tiudze nezve protagonist yako nyowani. Nyaya yake yekutanga yakanzi I am Rose Nhema. Ndiani Rose Nhema?
DZ NAAB: Rose Black igweta anotendeuka makumi mana emakore uye (sezvazvinoitika kune vazhinji vedu patinosvika zera iri) anoshamisika nezvaakaita nehupenyu hwake kusvika panguva iyoyo.
Mukomana wekutanga waRose akanyangarika aine makore makumi maviri asina kana trace. Achifungisisa nezvenyaya iyi, akatora makosi ekuva mutikitivha wega, asi akazotanga kushanda segweta uye haana kana kupihwa rezinesi. Iye zvino mutengi anomubvunza kuti aone kana murume wake asina kutendeka kwaari uye Rose anoona mukana wekutangazve kurota kwaakange ave nenguva refu akasiya shure. Rose anoita makumi mana izvo vanhu vazhinji vasingashinga: anomira kuve nezuva rake rekuzvarwa uye anotanga kuzadzisa zviroto zvake.
Pamusoro pekunzwisisa, Rose anofunga mukana wekuita vana, asi iye anoziva kuti nemumwe wake zvazvino zvichanetsa: Pedro murume akanaka, akanaka uye akapfuma, asi akarambana uye atova nevasikana vaviri. Kune rimwe divi, kuna Marc Lobo, mupurisa anoona nezve kuferefeta nezvekushaikwa kwaAlex. Marc anomiririra mukana werudo rutsva.
Ndokunge, Rose akabvaruka pakati perudo kubva kare, rudo rwazvino uye runogona kuitika ramangwana rudo.
AL: Rose Nhema ari pano kugara? Iwe unotengesa kune protagonist iyo inopfuurira kuburikidza nemanoveli ako here?
DZ NAAB: Ehe, Rose Nhema akazvarwa aine chinangwa chekuva saga. Muchokwadi, isu tave kutopedzisa chikamu chechipiri, icho chinozoburitswa mushure mezhizha. Nhoroondo yega yega inozvipedzisa, kunyangwe paine zvimwe zvirongwa zvinoramba zvakavhurika kusvika kupera kwesaga.
Chimwe chinhu chaitifadza zvakanyanya yaive simbi. Ndosaka takagadzira kuti Rose ndiye mwanasikana wemunyori anozivikanwa wetsiva, Benjamin Nhema, uye kuti imwe yeshamwari dzake inoda kuve munyori werudo. Izvo zvakatipa isu mutambo kuti titaure nezve nyika yevanyori uye kunyange kuseka isu pachedu.
AL: Ruzivo rwekutanga nemuparidzi: Zvakawanda. Izvi zvisati zvaitika, vese vari vaviri vanozivikanwa munharaunda yekunyora, vachifunga kumisangano yakakosha kwazvo mumhando yakadai seBlack Week yeGijon nevamwe vazhinji. Iwe unoona sei iko iko shanduko kubva kune yako-yekutsikisa kune yakajairwa kutsikisa?
DZ NAAB: Nyika yega yega ine zvinhu zvayo zvakanaka nezvakaipa. Kana iwe uchizvishambadza-wega, unofanirwa kutarisira zvese: kunyora, kururamisa, dhizaini, dhizaini dhizaini, kushambadzira ... Chinhu chakanaka chekuita edhisheni kumashure kwako ndechekuti inobvisa akawanda emabasa aya uye, pamusoro pezvose, kugoverwa muzvitoro zvemabhuku.
Chinhu chakanakisa nezvekuzvitsikisa-wega, pamwe neAmazon, ndechekuti iwe unogona kuziva ako ekutengesa manhamba ipapo uye kubhadharisa mushure memwedzi miviri, uchinge uine muparidzi wetsika iwe unofanirwa kumirira gore rakazara.
AL: David naAna vari sei sevaverengi? Zvakafanana mukuravira kana zvakasiyana? Ndeapi mabhuku muraibhurari yako aunoverengazve makore mashoma apfuura? Chero munyori waunofarira, mumwe weavo vanotenga maanoveli avo paanongoburitswa?
Ini ndiri Rose Nhema, nyaya inosanganisa iyo noir genre uye yerudo novel.
DZ NAAB: Muzhinji isu tinobvumirana pane zvatinofarira (ndinofungidzira imhaka yekuti takagara pamwe chete kwemakore mazhinji) uye sekungofarira kwatinoita misoro imwecheteyo pakunyora, tinobvumirana pakuverenga. Ini ndinofunga isu tese takadzidza kutaura nyaya nekuverenga Agatha Christie, Jules Verne kana Stephen King, semuenzaniso. Iye zvino tine vamwe vanyori vezvinyorwa, saDennis Lehane, uyo mune dzimwe nyaya dzake anomutsa dambudziko rehunhu rinokwanisa kukuzunza mukati. Isu takanyatsoda zano re Yakasviba uye yakaipa naJuanjo Braulio; uye isu tinotevera Almudena Grandes nekuda kwesitayera yake yekungwarira kana Javier Cercas yenzira yake ine hungwaru yekuburitsa nyaya.
AL: Pasinei nechimiro chechinyakare chemunyori wekutanga, akavharirwa uye asina kuratidzwa munharaunda, pane chizvarwa chitsva chevanyori vanotora tweet zuva rega rega uye nekuisa mafoto ku Instagram, kune avo masocial network hwindo ravo rekutaurirana pasirese. Hwehukama hwako hwakamira sei pasocial network?
DZ NAAB: Kana bhuku rikaburitswa unonyudzwa munhevedzano yehurukuro, hurukuro, tafura dzakatenderera, mitambo, nezvimwe. mauri iwe unofanirwa kugona kunakidza uye kukunda pamusoro peveruzhinji. Kana vanhu vakakuona uripo uye vachifunga kuti haugone kutaura, ivo vanofungawo kuti haugone kunyora, kunyangwe kana isina chekuita nazvo.
Nhasi munyori anofanirwa kunge ari showman, uchida kana kwete, uye pasocial media chikamu cheizvozvo ratidza. Ana anoshanda zvakanyanya mumasaiti, asi zviri pachena kuti mazuva ano ivo chikamu chakakosha chekusimudzira. A Tweet a kuchinja nemamiriyoni evateveri iwe unogona kuisa bhuku mu pamusoro yezvose zviyero zvekutengesa. Ini ndinorangarira nyaya ye Musikana ari muchitima iyo yakava a bestseller mushure meStephen King akanyora pa Twitter kuti anga asina kukwanisa kuzviisa pasi husiku hwese.
AL: Mabhuku piracy: Chikuva chevanyori vatsva kuti vazvizivise kana kukuvara kusingagadzirisike mukugadzirwa kwemabhuku?
DZ NAAB: Ini ndinopesana nemapuratifomu ayo anopa mabhuku epirati (kana mafirimu kana mimhanzi) uye purofiti kubva kubasa revamwe kuburikidza kushambadzira kana dzimwe nzira. Nekudaro, ini handirwisane nevanhu vasingakwanise kubhadhara bhuku kurirodha pasi nekuriverenga. Kunyangwe, muchokwadi, ivo vanogona zvakare kuzviita muraibhurari. Kune atove nemaraibhurari ayo anotendera iwe kuti utore iyo eBook zviri pamutemo zvachose uye zvemahara.
Kugura kuripo uye iwe unofanirwa kurarama nazvo. Kwandiri ine chikamu chakanaka: zvinosanganisira demokrasi yetsika. Asi ini zvakare ndinotenda kuti munhu mumwe nemumwe anofanirwa kuve nemhosva yezviito zvake uye izvi zvinongogoneka kuburikidza nedzidzo. Kana iwe uchikwanisa kubhadhara kuverenga bhuku, kuribhadharira, nekuti kana zvisiri, vanyori havazokwanise kuenderera nekunyora, kana vaparidzi kutsikisa.
AL: Pepa kana dhijitari fomati? Unobvumirana nazvo here?
DZ NAAB: Hongu, tinobvumirana. Tisati tapinda munyika yeAmazon, isu taive takapesana nedigital. Asi sezvo isu takatenga iyo e-kuverenga, isu taingoverengera chete mu eBook. Kana uchinge wajaira, zvinonyanya kugadzikana, kunyangwe iinewo zvainovhiringidza, senge kuti hauoni chivharo chebhuku pese paunoritora kana kuti zvakanyanya kunetsa kudzokera, kana iwe unoda kutsvaga chimwe chinhu.
AL: Vemabhizimusi, vabereki, vakaroora nevanyori vane hunyanzvi, ndeipi fomula yako?
DZ NAAB: Kurara zvishoma, hahaha. Tinomuka na6 mangwanani kuti tiite awa yekunyora nekuverenga husiku, mushure mekuradzika vana. Zuva rakazosara takaswera takabatikana pakati pebasa nekurera vana.
AL: Kupedzisa, ndinokukumbira kuti upe vaverengi zvishoma zvako: Ndezvipi zvinhu zvakaitika muhupenyu hwako uye zvinhu zvipi zvaunoda kuti zviitike kubva zvino zvichienda mberi? Kurota kuzadzikiswa uye kuzadzikiswa?
DZ NAAB: Vana vedu nemabhuku edu ndiwo akanyanya kubudirira kusvika pari zvino. Kuhwina mubairo weAmazon kwaive kurota kuchiitika. Nekuramba tichirota, tinoda, rimwe zuva, kuti tikwanise kuita raramo kubva muzvinyorwa. Uye padanho rega, kuita kuti vana vedu vave vanhu vakanaka, vanhu vebatsiro.
Ndinokutendai, David Zaplana naAna Ballabriga, tinokushuvira kuti uenderere mberi nekuunganidza budiriro mune rimwe dambudziko nyowani uye izvo Ini ndakasimuka mutema uve wekutanga mukuru saga yemhando dzakanaka dzemabhuku dzinozoita kuti tinakirwe nevaverengi vako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kutaurirana naDavid Zaplana naAna Ballabriga: Kana budiriro ikauya pamaoko mana.